Myanmar Extended International Flight Ban until August 31 | Myanmar Business Today
HomeBusinessMyanmar Extended International Flight Ban until August 31
The Department of Civil Aviation (DCA) has extended the Period of Temporary Measures to Prevent Importation of COVID-19 August 31 meaning all the international flights to and from Myanmar will remain suspended.
Myanmar has imposed the restrictions on air services to and from Yangon since March 30.
Myanmar Airways International announced that it will operate special relief flights to Guangzhou and Seoul when permitted.
It also said that the company’s Travel Policy will be extended to all affected passengers – with free of the charge date change, rebooking, and refund request option till 31 Oct 2020. Travel vouchers will be provided for non-refundable tickets & refund T&Cs applied for normal tickets. Travel voucher is non-transferable and valid until 31 Mar 2021.
COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာလေကြောင်းခရီးစဉ်များပျံသန်းပြေးဆွဲမှု ယာယီရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကို ဩဂုတ် လ ၃၁ ရက်အထိ လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DCA) က ထပ်မံသက်တမ်းတိုးလိုက်သည်။
MAI သည် ဘန်ကောက် (BKK)၊ စင်ကာပူ (SIN) နှင့် ကာလကတ္တား (CCU) ခရီးစဉ်များကိုကန့်သတ်ကာလအထိ ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်ပြီး ကွမ်ကျိုး (CAN) နှင့် ဆိုးလ် (ICN) ခရီးစဉ်များ ကို ခွင့်ပြုချက်ရရှိသည့်အခါ အရေးပေါ် အခြေအနေများအတွက်ပျံသန်းပြေးဆွဲသော ကူညီကယ်ဆယ်ရေး special relief flight များအဖြစ် ပြေးဆွဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း MAI ထုတ်ပြန်သည်။
ထပ်မံတိုးချဲ့သည့် ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည့်ကာလအတွင်း ခရီးစဉ်များအတွက် လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသောခရီးသည် လေယာဉ်စီးနင်းလိုက်ပါမည့်ရက်ကို ထိုင်ခုံနေရာရရှိမှုပေါ်မူတည်၍ အခမဲ့ပြောင်းရွေ့ခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်သည်။
စီးနင်းလိုက်ပါမည့်ရက်အသစ်ကို (Rebooking date) ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် refund လျှောက်ထားခြင်းတို့အား ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ အကြောင်းကြားပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံထားသည်။
ပြန်အမ်းငွေထုတ်ပေးခြင်းမရှိသည့် (Non-refundable) လက်မှတ်များအတွက် Travel Voucher အနေဖြင့် ပြန်အမ်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
Travel Voucher မှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိအကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများသို့ လွဲပြောင်းခွင့်မရှိ ကြောင်းသိရသည်။
ပုံမှန်လက်မှတ်များအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် (Terms & Conditions) နှင့်အညီ ပြန်အမ်းငွေများ ထုတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
Online Travel Agents (OTA) အပါအဝင် Travel Agents (အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ) မှတဆင့် လက်မှတ်ဝယ်ယူထားသည့် ခရီးသည်များအနေဖြင့် ရက်အပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်အမ်းငွေလျှောက်ထား ခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း MAI ကထုတ်ပြန်သည်။
Previous articleThe US Interested to Increase Economic Cooperation with Myanmar
Next articleLocal Gold Price on the Rise